Archive du 20171121
Mpitsoa-ponenana Maro no efa eto Madagasikara !
Miteraka ahiahy ny fisian’ny teratany Arabo mianatra teny Malagasy sy teny Frantsay eny amin’ny CDA Andohatapenaka. Inona no ao ambadika ary inona no tanjona ?
Federation Internationale Famubo Hiara hiasa amin’ny parlemantera vehivavy Malagasy
Taorian’ny nitsidihan’ny « federation internationale » Famubo notarihan’ny filohany Rtoa Monique Mujawamariya izay mandalo eto Madagasikara ankehitriny,
Sao diso kajy e
Miarahaba jean a ! dia tena tompon’ny fihetsiketsehana tokoa ianareo ka, tsy fantatra intsony anie izay marina sy diso e…
Seraseran’ny filoham-pirenena Nikorontana indray omaly
Niseho indray ny tsy fahamatorana teo amin’ny fiadidiana ny Repoblika omaly.
Radanoara Julien “Mora ho an’ny mampiorohoro ny miditra eto”
Mampanahy ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny momba ny fisian’ny teratany vahiny hafahafa miditra eto Madagasikara, izay efa manomboka mivoaka ny marina fa mpitsoa-ponenana izy ireo.
Rajaonarimampianina Nihaino ny hetahetan’ny ankizy
Niresaka sy nidinika nandritra ny 20 minitra teo ho eo teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha tamin’ireo ankizy enina mianadahy nisolotena ny ankizy manerana ny nosy omaly ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho fanamarihana ny andro eran-tany momba ny ankizy.
Andron’ny ankizy ho an’ny boriborintany faha-6 Naompanay tamin’ny lafin-javatra 3, hoy ny depiote Horace
Nomarihana omaly 20 novambra toy ny isan-taona ny andro maneran-tany ho an’ny ankizy hatramin’ny nanamarihana azy voalohany tamin’ny taona 1954 mba hanamafisana ny fanajana azy ireo sy ho fanajana ny zony.
Fampanambadiana ny zaza tsy ampy taona Mamolavola paikady hiadiana aminy ny ministeran’ny mponina
Mahatratra 41,2% ny tahan’ireo ankizy tsy ampy taona efa miroso amin’ny fanambadiana manerana ny Nosy ankehitriny.
Trondro no noharatoina Fatin’olona no azon’ny harato
Lehilahy iray hita faty, azon’ny mpanarato tany Sambava omaly maraina.
Filohan’ny ligin’ny baolina kitran’Analanjirofo Mbola ho kandida Atoa Ramaroson Jacques
Araka ny nambaran’ny eo anivon’ny CEN na « Comité Electoral National » Analanjirofo dia amin’ny alakamisy faha-23 novambra izao no hamohan-dry
Telma Coupe de Madagascar Etsy Mahamasina amin’ny alahady izao ny famaranana
Araka ny peta-drindrina efa aelin’ny FMF na ny Federasion’ny Baolina Kitra Malagasy ao anaty tranonkalam-pifandraisana dia fantatra fa ho tontosaina etsy
Fanjakan’ny maizina !
Maizina sy tsy misy mangaraharaha ny fomba fitantanana ny firenena amin’izao fotoana izao, fa saika ny fifanarahana maloto eo amin’ny mpitondra sy ny mpiara-miombon’antoka aminy no hampanjakaina eto.
Vehivavy voan’ny pesta Nijoro vavolombelona i Mamitiana F
Tovovavy iray antsoina hoe Mamitiana Francelia avy any ambanivohitr’i Toamasina no sahy nijoro vavolombelona momba ny niainany ny aretina pesta satria niharany izy.
Mpanendaka eny Analakely Am-polony maro no tratra sy nalefa any am-ponja
Mila miatrika sy manao fety am-pilaminana ny vahoakan’Antananarivo, hoy ny kaomisera Rabenandrasana Jean Michel omaly, eo anivon’ny Boriborintany voalohany.